Vietnam Time (GMT+7): Sat, May 21, 05:52:00 AM
+ Do Zimbabwean passport holders need visa to Vietnam?
+ Yes, Visa is required for citizens of Zimbabwean to visit Vietnam.
There are 2 ways to apply Vietnam Visa for the Zimbabwean citizens: Apply Vietnam Visa on Arrival or Apply Visa at Vietnamese Embassy.
For those who live far from Vietnam Embassy in Zimbabwe and do not wish to send away their passport, Vietnam visa on arrival is a best choice. Instead of getting visa directly at Vietnam Embassy, you will end up picking up your visa at one of Vietnam International Airports.
You should check out the address of Vietnam Embassy in the nearest countries because Vietnamese embassy or Consulate is not established in Zimbabwe.
Required paperwork: An Zimbabwe passport with at least 6 months validity, 2 passport-sized photos, stamping fees (varied from embassy to embassy)